Fandrosoan’ny Teknolojiam-Pifandraisana sy Fampitambaovao tao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Novambra 2017 13:46 GMT
Hatramin'ny nidiran'ny solosaina tao Kambodza, tsy mora velively ny nampiasàna ny endri-tsoratra Khmer. Na nisy azo noraisina aza ireo endri-tsoratra Khmer sasany toy ny : Limon, ABC, Khek, Battambang, ABC-tsy-misy elanelana ary ny Khek, sns…, dia nanohintohina ihany koa ny fifandraisana teo amin'ireo khmer mpampiasa azy ireo teny sasany tsy afaka ampifanolosoloana.
Noho ny tsy fisian'ny fitovian'ny endri-tsoratra teny amin'ireo samy mpampiasa, tsy afaka namaky imailaka, antontan-kevitra, na pejy an-tranonkala ireo mpampiasa tsy nànana ny endri-tsoratra tena nilaina voapetraka tao anatin'ny solosainy manokana. Asa goavana tokoa ny famoahana torohay tamin'ny tranonkala na bilaogy khmer iray. Seserak, Kambodziana iray mianatra any Japàna, miteny hoe mila mampiasa ny lozisiely Word izy mba hampidirana lahatsoratra, avy eo mamadika izany lahatsoratra izany hanjary ho amin'ny endrika sary, alohan'ny handefasana azy tsy misy tomika ho ao amin'ny bilaoginy.
Mamely ireo Amerikana Goavana Mpamokatra Rindrambaiko i Cambodia ao anatin'ny Tolona hisian'ny Endri-tsoratra Khmer amin'ny Solosaina, lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny “Cambodia Daily” tamin'ny 2002:
“Nanontanian'ny minisitra iray avy ao amin'ny governemanta ny lehilahy iray nametraka voalohany ny rafitra fifandefasana imailaka tao Kambodza raha toa izy ka afaka mandefa imailaka amin'ny teny Khmer mankany amin'ny vadiny, izay tsy miteny anglisy. Nambara azy fa tsy azony atao.
Azo ambara ho tsy mbola niova amin'izany ihany no valinteny, taona fito taorian'ny nahatongavan'ny imailaka tao Kambodza ary taona dimy taorian'ny nahatongavan'ny aterineto. Tsy niteny Khmer ireo olona nanamboatra ny solosaina tany am-piandohana, araka izany tsy mampiasa azy io koa ny solosaina.”
Kanefa, rehefa ela nitolomana, tsy ho ela i Kambodza dia hiditra amin'ny sehatra iraisampirenena miaraka amin'ny endri-tsoratra nataony ho an'ny solosaina, ny Khmer Unicode. Ny Khmer Unicode dia ahafahan'ny solosaina sy ireo erantany mampiasa solosaina ho afaka mifandray amin'ny fomba tsotra sy mandeha hoazy.
Ankehitriny, efa mihabetsaka ireo tranonkala nampiasa ny teny Khmer no nikisaka mampiasa ny Khmer Unicode. Vao haingana koa ny Khmer Radio Australia no navadika ho amin'ny endrika Unicode. Nandritra izany fotoana izany, notakiana tamin'ireo mpampiasa ny hametrahan'izy ireo ao anatin'ny solosainy ireo endri-tsoratra mba hahafahana mamaky tsara ny lahatsoratra. Ninoana fa hiditra ho hita anaty rafi-pihariana fampiasa amin'ny Linux sy ireo dika vaovaon'ny Microsoft Windows ny Khmer Unicode. Hatreto aloha, nisy fiantraikany tamin'ny famokarana rindrambaiko amin'ny fiteny ao an-toerana sy ny fifandraisana ny fampidirana ny Khmer Unicode.
Tao anatin'ny efa ho dimy volana, taorian'ny nanombohana ny fampiantranoany ny tranonkala voalohany tao aminy, nahasarika mpampiasa niisa 333 ny Khmer Software Initiative, tetikasa iray namoronana rindrambaiko fizahan-toerana. Isaky ny lahatsoratra tsirairay nalefan'ireo mpanoratra bilaogy dia mivoaka araka ny filaharany eo amin'ny pejy iray ao amin'ilay tranonkala. Nampiasain'ny sasany tamin'ireo mpanoratra bilaogy io fitaovana io ho toy ny takelaka fanaovana filazàna ety anaty aterineto, ny sasany manoratra momba ireo olan'ny teknolojia, raha ny sasany indray mamintina ireo lahatsoratra milaza vaovao mahaliana sy mitantara izay tantara manintona azy manokana. Io voalohany indrindra mpanome tolotra fanoratana bilaogy io no nampiasa ilay fitaovana fanoratana bilaogy, izay nihodina tamin'ny alàlan'ny Drupal, ilay rindrambaiko misokatra fandrindràna votoaty.
Nanambara tamin'ny fomba tsy ofisialy ihany koa ny tetikasa “Khmer Software Initiative” ny fametrahana ny fanatsinjarana Linux Derbian, rafi-pihariana iray manana loharano misokatra, izay teo an-dalam-piketrehana. Ezaka hisava làlana ho an'ireo Kambodziana tsy miteny anglisy mba hianarany sy hiasàny amin'ny solosaina, tsy mila mianatra ny teny anglisy. Ity ezaka mivaingana ity dia hanome safidy tsy andaniana vola hialàna aminà rindrambaiko natao ho fitadiavambola izay tsy ho takatry ny mponina ao an-toerana mihitsy.
Ao anatin'ny fifandraisandavitra Khmer, ny fizahàna ny laharan'ireo fandraharahàna ao Kambodza, Pejy Mavo, dia tranonkala teny anglisy foana hatrizay no nahafahana nijery azy, nefa ankehitriny efa namboarina koa ho amin'ny fiteny Khmer. Ho avoaka amin'ny endrika boky azo avadibadika ihany koa ny Pejy Mavo Khmer, takelaka iray fizahàna ety anaty aterineto, ary koa fampiasa iray afaka ampiasaina aminà rindrambaiko Windows.